Haintrano goavana tetsy Andohatapenaka I: olona 3 namoy ny ainy, trano 300 eo ho eo levon’ny afo | NewsMada
Haintrano goavana tetsy Andohatapenaka I: olona 3 namoy ny ainy, trano 300 eo ho eo levon’ny afo
Par Taratra sur 24/06/2020
Trano hazo sy trano vita amin’ny biriky 300 eo ho eo no kila hotohoton’ny afo. Olona telo namoy ny ainy. Fianakaviana anjatony no traboina tampoka. Tarehimarika vonjimaika, vokatr’ilay haintrano goavana nitranga tetsy amin’ny fokontany Andohatapenaka I, omaly tolakandro ireo.
Taorian’ilay teny Manarintsoa Atsinanana, ny 11 jona sy ny teny Betongolo, ny 18 jona teo, ity no haintrano goavana fahatelo nitranga teto an-drenivohitra, tao anatin’ity volana jona ity. Trano miisa 300 eo ho eo indray , raha ny tarehimarika vonjimaika no kila hotohoton’ny afo, omaly hariva, teny amin’ny fokontany Andohatapenaka I. Trano hazo ny ankamaroany, saingy tsy vitsy koa anefa ireo trano biriky. Fantatra fa olona telo no tsy tafavoaka ka maty tamin’izany ankoatra ireo biby fiompy sy fananana kila… Ny teny an-koditra sisa ny an’ny sasany. Trano hazo maromaro niaraka tamin’ny trano biriky ireto kilan’ny afo ireto. Nijoalajoala ny afo sy ny setroka ary nahita izany ny nanerana an’Antananarivo Renivohitra.
Tsy fantatra ny antony fa ny afo efa nijoalajoala no nahataitra ireo teo amin’ny manodidina, araka ny fanazavan’ireo nahita. “Niainga avy ao amin’ny trano hazo iray tao afoavoany tao ny afo. Tsy fantatra hoe inona marina ny zava-nitranga fa afo efa nirehatra no hitanay”, hoy ny fitantaran-dRavaoarisoa, renim-pianakaviana iray. Raikitra ny fifanjevoana teo amin’ireo mponina raha vantany vao nirehitra ny trano. Nikoropaka nanao ny ho afany tamin’ny famonjena azo navotana ireo niharam-boina. Horakoraka, ranomaso, hikiaka tsy nifandrenesana. Nisy tamin’ireo fianakaviana sasany no mbola tsy tonga tao an-trano tamin’ny fotoana nitrangan’ny firehetana.
Nanahirana ny famonoana ny afo…
Nambaran’ny sampana mpamonjy voina fa tokony ho tamin’ny 5 ora hariva latsaka teo, nahazo antso izy ireo momba ny trano may teny an-toerana. “Tsy mbola voafaritra aloha hatreto ny isan’ny trano may sy ny antontanisa rehetra fa manodidina any amin’ny 50 tafo any ho any ireo raha ny tomba-maso ivelany. Ny eo anivon’ny fokontany ihany no tena mahafantatra tsara ny isan’ny trano sy ireo niharam-boina”, hoy ny lehiben’ny sampana mpamonjy voina (antso an-telefaonina) eny Tsaralalana, ny Lt-Kly Razafimanahaka Tiana. Fotoana fohy taorian’ny firehetana, tonga teny an-toerana nanao ny asam-pamonjena ny fiaraben’ny mpamonjy. Sahirana izy ireo noho ny fahateren’ny toerana. Voafehy ihany izany na naharitra teo amin’ny adiny iray mahery teo aza ny famonoana ny afo.